Beddelleen kuusaa balfa gogaa qopheessaa jirti – Fana Broadcasting Corporate
Beddelleen kuusaa balfa gogaa qopheessaa jirti
Finfinnee, Bitooteessa 5, 2011 (FBC)- Magaalaan Beddellee bakka balfa gogaa meetir kuubii kuma 43 fi dhibba 2 kuusuu danda’u qopheessaa jirti.
Bakka balfa gogaa kana hojjechuuf beenyaan Birrii kuma 400 kuma78 fi170 jiraatota iddoo isaanii irraa ka’aniif kan kaffalame yoo ta’u, kaayyoon guddaan bakki balfa gogaa kun qophaa’uun barbaachiseefis magaalaattii kosii adda addaa irraa walaba taasisuufi.
Magaalaattii keessatti kana dura sababa bakki balfa gogaa itti gatan hin jirreef magaalaattiin akka hin qulquloofneef ka’umsa ta’eera.
Rakkoo kana hundeerraa furuuf bulchiinsi magaalaattii bara kana hojiiwwan xiyyeeffannoon hojjechuuf karoorfate keessaa bakki balfa gogaa itti kuusan kun isa ijoodha.
Dabalataanis odeeffannoon Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Magaalaa Beddellee irraa arganne akka mul’isuutti, bakka balfi dhangala’aan itti kuufamus hojjetamaa kan jiru ta’uu fi bakkichis yeroo gabaabaatti hojjetamee xumuramuun tajaajila kan kennu ta’uudha.